Office China na boaty fitehirizana taratasy an-trano misy fatrany lehibe azo aforitra Mpanamboatra sy mpamatsy | Huaguang
Ny boaty fitehirizana taratasy na birao an-trano misy afovoany lehibe azo aforitra
Size: 36cm * 28.5cm * 17cm
Antsipirian'ny fonosana: pcs roa ao anaty polybag na ny zavatra takinao
Ny boaty mitazona zavatra, dia ny zavatra (zavatra marobe manondro lahatsoratra kely, dia toy ny: biraon'ny birao, kosmetika, angona rakitra, fitaovana kely, ba kiraro, pataloha sns) manangona miaraka, toy ny anarany milaza hoe fitehirizana boaty iray.
Boaty fitehirizana, fantatra ihany koa amin'ny hoe boaty fahagola, dia nampiasain'ny ekipa arkeolojika tamin'ny andro voalohany mba hitahiry sombin-drazana kolontsaina nolavahana sy namboarina. Ireo boaty ireo dia mazàna isaina amin'ny ankapobeny, ny sasany lehibe ary ny sasany kely, fa ny ankamaroany dia ny haben'ny boaty kiraro (matetika no mavesatra ny vatan-kazo nakarina, ary ny haben'ny boaty kiraro no mety indrindra amin'ny fikirakirana). Ao amin'ny fiarahamonina maoderina, ny boaty fitehirizana dia niova tsikelikely ho "boaty miscellaneous" mitovy amin'izany, izay ampiasaina hitazomana zavatra. Ny boaty fitehirizana eny an-tsena dia fahita tokoa, ny vidiny ambany, ny tombony lehibe, mety indrindra ampiasan'ny besinimaro, ka maro ny marika boaty fitahirizana eny an-tsena.
Ny dikan'ny hoe fitehirizana dia ny fandefasana toerana azo ampiasaina ara-drariny dia ny fanatratrarana ny tanjona hampiasaina toerana sahaza sy mahomby. . Ny fitaovana taratasy dia azo averina averina aorian'ny fampiasana azy, izay mahafeno ny filan'ny fiarovana ny tontolo iainana koa. Ary mampiasa visy izy, noho izany dia mora sy haingana ny mivory, tsy mila miahiahy momba ny mividy azy ianao ary tsy afaka manangona azy. Amin'ny ankapobeny dia andiana fitambarana 2, atondrana miaraka amin'ny sarimihetsika mihemotra, tena lafo ny vidiny. Ity boaty fitehirizana ity dia loko matevina, mety amin'ny fitehirizana antontan-taratasy amin'ny antontan-taratasy, fa mety koa amin'ny fitehirizana ny kiraro sy akanjo. Afaka mividy andiany iray ianao, iray ho an'ny biraonao ary iray ho an'ny tranonao. Ataovy madio sy milamina ny biraonao sy ny tranonao. Tsy matahotra intsony ny zavatra diso toerana tsy mahita.
Kitapo fonosana vy
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18870716 ''
Ny haben'ny 36cm * 28.5cm * 17cm dia manana fahaizana lehibe kokoa ary afaka mitazona zavatra betsaka kokoa.
Mariho ireo zavatra ao anaty taratasy mba handaminana sy hikarohana mora.
Teo aloha: Custom logo Fanamboarana boaty firavaka vita tanana vita amin'ny vita amin'ny vita amin'ny vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita vita fanaarangaly mirary
Manaraka: Ny fanangonana birao fanontam-pirinty avo lenta avo lenta
Vata fanomezana lehibe
Vata fivarotana antsinjarany
sarom-bozaka mitafo baoritra mitazona baoritra compa ...
Bira fitehirizana taratasy Biraon'ny kosmetika / fitehirizana trano ...
CD taratasy fitehirizana boaty birao fitehirizana kosmetika Orga ...
baoritra vatasarihana vatasarihana boaty fitehirizana unde ...